Alahady 10 Novambra 2019 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahadim-bokatry ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala
« Mihobia ho an'i Jehovah, ry tany rehetra, Velomy ny hoby, ka mihirà. » (Salamo 98:4)
Alahady faharoa ibanjinana ny lohahevitra « Ho avy amin’ny heriny ny Tompo » Alahady ivom-bokatry ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranonkala. Ny Mpitandrina RAHOLIDINA Fiara Tsiriavotra no nitondra ny tenin’Andriamanitra ary noarahabaina teo am-panombohanan’ny fotoana. Izy dia Mpitandrina ao amin’ny Aumonerie Chapelle militaire Ankadilalana.Ny filohan’ny rafitra RAJAOFETRA Seta kosa no nitarika ny fotoana.
Ho fankalazana sy fiderana an’Andriamanitra dia niarahana namaky ny Salamo 96,1-6. Taorian’izay dia nohiraina ny hira faneva faha 200 taonan’ny FJKM
Natolotra an’Andriamanitra ny dera, haja ary fisaorana noho ny famindram- pony sy ny fahasoavany ary noho ny fahatrarana ny fotoana. Nangatahina ny Fanahy Masina mba hanatrika ny fotoana. Nangatahina ihany koa ny Tompo mba hanavao ny fifandraisana amin’Andriamanitra.
Noho ny tsy fahatanterahantsika sy fahamelohantsika dia nangatahina ny famelan-keloka avy amin’Andriamanitra. Nisaorana ny Tompo noho ny famelan- kelony. Nisaorana ihany koa ny Tompo noho ny fanomezany ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala. Nisaorana ihany koa ny Tompo noho ny fanomezam- pahasoavana natolony nahafahana nanatontosa ny asan’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala. Nangatahina ihany koa ny fanatrehan’ny Tompo ny fotoana.
Ny Asan’ny Apostoly 12,11b no nangalana ny hafatra izay natolotr’i Rabemila Anna.
“Ankehitriny , fantatro fa marina tokoa fa ny Tompo efa naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin’ny tanan’I Heroda sy ny fanantenan’ny Jiosy rehetra.” Notantaraina tamin’izany ny fanenjehan’i Heroda, mpanjakan’I Palestina ny fiangonana, ny fankasitrahan’ny vahoaka Jiosy ny famonoana an’I Jakoba ary ny namonjen’ny Tompo an’I Petera tao an-tranomaizina tamin’ny alalan’ny Anjely.
Ny hanatra azo noraisina tao anatin’izany tantara izany dia ny hoe”Mahery ny fivavahana”; “Mamonjy izay mivavaka sy mahatoky Azy ny Tompo”; “Mila manome voninahitra sy mangataka ny Fanahy Masina isika hitarika ny fiainantsika.” Taorian’izay dia nohiraina ny FFPM 788,1
Ny hira FFPM 244, 1,2 no nohiraina mialohan’ny Vavaka nisaorana ny Tompo satria mbola nanome fahafahana mandre ny teniny.Nentina am-bavaka ny mpamaky ny Teny sy ny Mpitandrina izay hitory ny Teny mba hahatafita tsara ny hafatra. Ny Periokopa androany dia ny Salamo 98,4-9,Jaona 14,1 -7,2 Petera 3, 8-13. Taorian’ny vakiteny dia nohiraina ny FFPM 207, 1-3
Teo am-piandohana dia nisaorana ny Gazety Taratry ny Famonjena sy tranonkala, norariana soa ary nampaherezina. Nisaorana ihany koa ny FJKM Amparibe Famonjena fa mbola mampandroso izany asa izany.
Ny Salamo 98 no nangalana ny hafatra. Tamin’ny alalan’ny tsangan-tanana dia tsapa fa maro ny mpanompon’Andriamanitra nahazo valim-bavaka tamin’Andriamanitra rehefa nametraka ny olany teo am-pela-tanany. Maro tamin’izy ireo ihany koa ny nisaotra sy nidera ny Tompo rehefa azony ny valim-bavaka. Nipetraka teto ny fanontaniana manao hoe: “Ahoana izany midera an’Andriamanitra izany”. Ny Salamo 98 no mamaly izany.
Ny Salamo faha-98 dia Salamo noventesina ho fisaorana an’Andriamanitra noho ny nanehoany ny famonjeny sy ny fahamarinany. Amin’ny fetin’ny Tabernakely andro firavoravoana no iventesana ity Salamo ity.Tamin’ny alalan’ny tsanga-tanana no nahatsapana ny fahavitsian’ny olona mahafantatra ny atao hoe Tabernakely.Nangatahin’ny mpitoriteny ny Gazety mba hampianatra ny mpino ny dikan’ny Tabernakely.
Nanafatra ihany koa ity mpitandrina ity fa ilaina ny mampianatra rehefa mitory teny fa maro ny zavatra mahakasika ny finoana no tsy hain’ny Kristiana. Rehefa noafahin’Andriamanitra tamin’ny fanandevozan’ny Egiptiana ny zanak’israely dia faly ka nidera an’Andriamanitra. Manao ahoana izany fiderana an’Andriamanitra izany? Rehefa midera isika dia tokony atao ren-tany ren-danitra ny hiakam- pifaliantsika.Tsy mhazatra antsika FJKM izany “louange” izany kanefa dia ilaina izany rehefa midera ny Tompo isika.
Manafaka ny gadra ny hiram-piderana. Raha tao am-ponja Petera dia ny hiakam-piderany no namotsotra ny gadrany. Raha te handresy ny ady isika dia mila manao fiderana. Mandresy ny herin’ny Devoly ny fiderana an’Andriamanitra. Ary rehefa afaka amin’ny ady sarotra isika dia mila misaotra ny Tompo amin’ny alalan’ny feo fiderana.
Raha ny hiran’izao tontolo izao dia mahafinaritra ny olona ny mandefa azy mafy sy manakoako. Fa maninona kosa ny hira fiderana an’Andriamanitra no tsy sahintsika ny mandefa azy mafy ho ren-tany sy ho ren-danitra. Tsy ampy fiderana ny olona hany ka mandresy ny devoly. Ataovy manakoako ren-tany sy ren-danitra ny fideranao ny Tomponao.
Rehefa avy ny fahafatesana dia ambara fa ho avy ny Tompo ka handray antsika ho any Aminy; Ambara ihany koa fa manantena lanitra vaovao sy tany vaovao isika Kristiana; Ho rava izao rehetra izao; Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; Tsy misy afaka mankany amin’ny RAy raha tsy amin’ny alalan’I Kristy; Ho avy Jesoa Kristy hitsara izao tontolo izao. Aza miandry fahafatesana, dieny izao ety an-tany izao dia hevero ny ho avinao. Ny fitsarana ety an-tany no miangatra fa ny fitsaran’Andriamanitra tsy misy aferafera. Kristy ihany no afaka manavotra antsika. Rehefa tsy Jesoa Kristy no raisina dia tsy avotra.
Aoka isika handeha araka ny fahamarinana. Hitan’Andriamanitra ny zavatra rehetra ataontsika. Tsy misy na inona na inona azontsika afenina eo anoloanan’Andriamanitra. Ity tanintsika ity dia feno tsy fahamarinana; jereo anie ny sehatry ny asam-panjakana, misy ny “fonctionnaire fantome”; eny an-dalam-be, maro ny olona mandainga amin’ny alalan’ny finday; … Jereo ny tsy fahamarinana eo amin’ny fiainanao. Tian’Andriamanitra hibebaka ianao.
Ao anatin’ny fiangonana dia misy ny olona sady mino no miangona ireo no mpivavaka tena mafana fo saingy izy ireo no vitsy an’isa indrindra Ao ireo mino kanefa tsy miditra am-piangonana. Ny maro indrindra dia ireo tsy mino anefa tonga miangona. Io no maro indrindra. Ireto farany ireto dia tonga eo am-piangonana noho ny tsindry nataon’ny ray aman-dreniny vita batisa izy, mpandray, mandray anjara mavitrika amin’ny fiainan’ny fiangonana saingy tsy manana ny Tompo. Farany dia misy ny olona sady tsy mino no tsy miangona. Fanasana amin’ireo fahasoavana miditra amin’ny namany toy ny Batisa, Fandraisana ny fanasan’ny Tompo, Fanambadiana sy ny sisa no ahatongavany any am-piangonana. Tsy mahagaga raha toa izao ny firenentsika satria maro ireo tsy mino kanefa tonga aty amin’ny tranon’Andriamanitra ; Vitsy kosa ireo tena kristiana tonga ao amin’ny tranon’Andriamanitra. Mila mibebaka isika raha tsy izany dia ho very.
Misy tantara kely iray naytolotry ny mpitoriteny: Maty ity filoham-pirenena iray, rehefa tonga teo amin’ny vavahadin’ny lanitra izy dia nampisafidianan’I Masin-dahy Piera tompon’ny fanalahidin’ny lanitra hoe handeha any amin’ny elo sa ho any am-paradisa? Ny paradise no nosafidiany. Nasain’I Md Piera nandramany ary aloha ny miaina any amin’ny helo sy paradisa. Rehefa tonga tany amin’ny helo izy dia faly sy hita nahazo aina satria hitany tao avokoa ny namany ary naira nikorana tamin’izy ireo izy. Rehefa tonga tany am-paradisa kosa izy dia tsy nahazo aina satria sady tsy nisy fantany ireo olona tao no tsy nahazatra azy ilay fiainana tao. Taorian’izay dia nivadi-kevitra ny anao lahy ka nisafidy ny helo. Rehefa tena nalefa tany amin’ny helo izy dia kivy satria tena afobe no tao. Rehefa nanontany izy nanao hoe “Angaha tsy ilay fiarahana misotro sy mikorana sahala amin’ilay niarahana tamin’ny fanandramana no aty?” dia tsotra no navalin’ilay devoly taminy nanao hoe “Fampielezan-kevitra ny ahy ireny.” Aza mety ho fitahin’ny devoly ianao. Aza mety ho revon’izao tontolo izao.
Derao mandrakariva ny Tompo. Ny ataonao ety an-tany no itsarana anao.Kristy no lalana.
Taorian’ny toriteny dia nanao ny anjara hirany ny Sampana Taninketsa.
Nisaorana ny Tompo noho ny fampianarany. Nangatahina ny Tompo ahatonga ny mpianakavin’ny finoana hahay mampiatra sy hiaina ny anatra voaray tamin’ny toriteny.
Nangatahina ny Tompo ny mba hahaizana mivavaka sy midera ho fiomanana amin’ny fiveranan’ny Tompo eny amin’ny rahon’ny lanitra. Nangatahina ny Tompo ny mba hananantsika toetra feno fahamarinana. Nangatahina ihany koa ny Tompo mba hanamasina ny mpanompony.
Taorian’ny vavaka dia niarahana nanonona ny fanekem-pinoana faharoa.
Nifantoka tamin’ny fampahafantarana ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala ary ny fanentanana ny vahoakan’Andriamanitra hanatevina ny mpikambana hanohana azy ary hanjifa ny gazety sy hitsidika ny tranonkala ny tatitra. Araka izany ary dia nambara fa nosokajiana ho ASA eo anivon’ny fitandremana ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranonkala.
Ny anjara asany dia ny fampianarana, fitaizana, fanolokoloana ny saina ary fizarana vaovao. Namafisina fa mivoaka isam-bolana ny Gazety. Notaterina tamin’ny fiangonana ny zavatra notontosain’ny Gazety sy tranonkala nandritry ny erinandrom-bokany.
Nampahafantarina ny mpianakavin’ny finoana ny fomba fiasany, ny vokatra vokariny, ny zava-bitany, ny fahasarotana atrehiny ary tsy nadinoina ny nanentana ny mpianakavin’ny finoana mba hifanome tanana amin’ny fampandrosoana ny asa.
Taorian’ny tatitra dia ny FFPM 308, 1-4 « O miainga miasa izao » no anjara hiran’ny Gazety sy Tranonkala.
Filazana avy any ivelany:
Nisy taratasy fisaorana avy amin’ny Foibe FJKM mahakasika ny fankalazana ny faha 25 taona nitandreman’ny MpitandrinaRAKOTONIAINA Jackson Rolland
Nambara fa alahady natoka na itrotroana am-bavaka ny FIFA anio
Anio no fisokafan’ny taom-pianarana akademikan’nyfaculté de théologie.
Ny 15 Novambra amin’ny sivy ora sy sasany ny fivoriamben’ny AFF Synodam- paritany Antananarivo Andrefana.
Nandefa taratasy fanasany mahakasika ny jobily faha 150 taonan’ny FJKM Anosisoa Ambohimanarina izay ho tontosaina ny 14 Novambra amin’ny sivy ora sy sasany maraina.
Nampatsiahivina fa alahadim-bokatry ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranonkala anio
Tontosaina anio ao anatin’ny asa vavolombelona ny fandraisan-tanana sy fitsofan-drano ireo Vaomieran’ny fankalazana ny jobily faha 50 taonan’ny Antoko Mpihira Hasin’ny Famonjena.
Nampandrenesina ny fiangonana fa amin’ity herinandro manaraka ity no alahadim-bokatry ny SAMPATI.
Nambara ny voka-dalaon’ny Amboaran’ny Filohan’ny FJKM.
Nambara ny toetry ny vola nandritry ny herinandro.
Novakiana ireo filazana avy any amin’ny Sampana, Sampan’asa ary vaomiera. Anisan’izany ny fivoriambe faharoan’ny Sampana Dorkasy izay atao ny 12 Novambra
Ny fivoriamben’ny SLK kosa dia ho tanterahina ny 16 Novambra. Nampahafantarina ny mpianakavin’ny finoana ny fanombohan’ny fianarana Sekoly Alahady.
Nisaorana ny vaomieran’ny fifandraisana noho ny fahatontosan’ny fitsangatsanganan’ny fiangonana.
Nampilazaina ny komitin’ny trano atsimo mba hivory ny 12 Novambra amin’ny enina ora hariva.
Nentanina ny mpianakavin’ny finoana mahakasika ny fanomezana izay atolotra ireo mpiomana ho mpitandrina any Fianarantsoa.
Novakiana tamin’ny mpianakavin’ny finoana ny tolotr’asa mahakasika ny fitadiavan’ny fiangonana mpamily.
Niarahaba sy nirary soa ny Gazety sy tranonkala ny mpitandrina noho ny fankalazana ny ivom-bokany.
Nanentana ny mpitandrina ny irosoan’izay liana amin’ny fiofanana SEFALA sy Mpitandrina.
Nanentana ny fitondrana am-bavaka ireo ekipantsika mandray anjara amin’ny amboaran’ny filoha ny mpitandrina.
Nentaniny ihany koa ny mpianakavin’ny finoana hitondra am-bavaka ny fivoriamben’ny Fikambanan’ny Diakona sy Loholona izay ho tontosaina eto amin’ny fitandremana Amparibe Famonjena.
Farany dia nisaotra ny Mpitandrina RAHOLIDINA Fiara Tsiriavotra ny Mpitandrina nanaiky nitondra ny tenin’Andriamanitra.
Ireto avy ny hira: nagatahin’ny mpianakavin’ny finoana: FFPM 12,1 / FFPM 28,1 / FFPM 627,1 / FFPM 731,1 / FF 32,1 / Aza avela hahalala / Enga anie ka homba anao Jesoa / Misaotra Annao izahay /
Fangataham-bavaka: Fangatahana mba hiorina ara-pinoana, Fisaorana noho ny fahafahana fanadinana,Fangatahana vavaka ho an’ny dia any Fianarantsoa ho fanohizana ny fianarana, Fangatahana fitahiana ho an’ny fiainana sy fianarana, Vavaka hihatrehana fandidiana, Fisaorana noho ny fitahiana, Fangataham-bavaka manoloana ny fahoriana mianjady, Vavaka ho an’ny fianarana
Hira fanolorana ny rakitra: FFPM 541,1
Fandraisan-tanana sy fitsofan-drano ireo Vaomieran’ny fankalazana ny jobily faha 50 taonan’ny Antoko Mpihira Hasin’ny Famonjena.
Nangatahina ny Fanahy Masina hiasa ao anatin’ireo vaomiera ahatontosa an- tsakany sy an-davany ny andraikiny.Nangatahina ny Tompo mba hivimbina sy hitantana ireo mpanompony ireo.
Nisaorana ny Tompo noho ny fampianarany. Nangatahina ny Tompo mba hiaina ny Tenin’Andriamanitra nozaraina teo ny mpianakavin’ny finoana. Nentina am-bavaka ny fivoriamben’ny FDL, ny ekipan’ny fiangonana miatrika ny amboaran’ny filoha, ny Mpitandrina RAHOLIDINA Fiara Tsiriavotra sy ny fianakaviany, ny Gazety sy Tranonkala sy ireo rehetra misehatra ao anatiny, ireo maniri hianatra Sefala sy hiomana ho Mpitandrina, ny dia mandeha any Fianarantsoa. Tsy nadino ihany koa ny nitondra am-bavaka ny fiangonana,ireo mpitondra fiangonana ary ireo tompmon’Andraikitra eo anivon’ny FJKM. Nentina am-bavaka ihany koa ireo sahirana, tsy salama, mana-manjo, azon’ny tsindry hazolena, tratran’ny tsy fidiny.
Ny hira: FFPM 332, 1 no natao mialohan’ny namakiana ny Tondrozotra 2019 sy nanolorana ny tsodrano ary ny hira FFPM 332,2 taorian’izay. Nisy ny asa sy fampaherezana taorian’izay.
Nitarika ny fotoana: RAJAOFETRA Seta
Dimy minitran’ny Sekoly Alahady: RABEMILA Anna
Nitondra am-bavaka ny vakiteny: RABEMANANORO Jonathan
Namaky ny teny: RANAIVOSON Joël, RAKOTONDRAMBOA Jean
Nitory ny teny: RAHOLIDINA Fiara Tsiriavotra
Namaky ny Voady sy raki-pisaorana: HAJA RALAINDIMBY
Namaky ny tatitry ny Gazety sy tranonkala:RALAIARIMANANA Narindra
Nitondra ny raharahan’ny fiangonana: RAKOTOMANANA Andry
Tompon’andraikitry ny fafana: RABIAZAMAHOLY Mahery
Tompon’andraikitry ny fanamafisam-peo: RAMAHERY Yves
Naka ny sary : Raharijaona Solofonirina Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky.